Xog:Labadii xildhibaan ugu saameynta badnaa mooshinkii laga keenay xukumada oo barlamaanka isaga baxay | Badweyn.com
Xog:Labadii xildhibaan ugu saameynta badnaa mooshinkii laga keenay xukumada oo barlamaanka isaga baxay
Qaar ka mida xildhibaanada golaha shacabka ee ka horjeeday go’aankii ay xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay sarkaalka ONLF C/kariin Qalbi dhagax oo lagu wareejiyay Itoobiya ayaa ka baxay kulanka Baarlamaanka ee ka socda xarunta golaha.
Xildhibaan Zakariye Xaaji Cabdi iyo Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mid xildhibaanada isaga tegay kulanka iyadoo ay socoto doodii ku saabsaneyd kiiska Qalbi Dhagax, taasoo ka dambeysay markii ay arkeen sida doodu u socoto iyo tirada xildhibaanada taageersan go’aanka xukuumadda.
Labadan oo ka mida kuwa ugu cadcad ee arrintan ku taagnaa ayaa qoraallo ay baraha bulshada dhigeen ku sheegay in arrintan ay tahay khiyaano Qaran, waxaana ay rajo weyn ka qabeen in golaha shacabka ka hor imaan doono go’aankan.
Xildhibaannada Mahad iyo Zakariye ayaa sugi waayay gabagabada dooda xildhibaanada iyo go’aanka laga qaadan doono, waxaana la arkayay iyagoo isaga baxaya xarunta Baarlamaanka.
Inta badan xildhibaannadii doodda ka jeediyay kulanka ayaa taageeray go;aanka xukuumadda iyagoo arrintan ku sheegay mid xukuumadda ay go;aan ka gaari karto.